Warbixin lasoo saaray oo muujineysa in Somalia ay kaalinta koowaad kaga jirto argagaxisada, halka dalka Koonfurta Sudaan-na ay gashay kaalinta shanaad. – Radio Daljir
Warbixin lasoo saaray oo muujineysa in Somalia ay kaalinta koowaad kaga jirto argagaxisada, halka dalka Koonfurta Sudaan-na ay gashay kaalinta shanaad.
Agoosto 4, 2011 12:00 b 0
Lodon, Aug 04 – Warbixin cusub oo la soo saaray ayaa muujineysa in dalka Somalia oo lagu suntay in uu yahay dalka kaalinta koowaad ka galay liiska khataraha waxa loogu yeero argagaxisada.
Warbixntaan aya waxaa magaalada London kasoo saaray Terrorism Risk Index (TRI) waxana ay warbixinta lagu xusay in dalka caalamka ugu cusub ee Koonfurta Sudan uu kaalinta shanaad ka galay waddamada lagu hubo khataraha argagixisonimo, waxaana ay waddamadaas ay kala yihiin Somalia (1), Pakistan (2), Iraq (3),Afghanistan (4) iyo wixii ka sareya (5), Yemen (6), dhulka falastiin ee l haysto (7), DR Congo (8), Jamhuuriyada badhtamaha Africa (9), Columbia (10), Algeria (11), Thailand (12), Philippines (13), Russia (14), Sudan (15), Iran (16), Burundi (17), India (18), Nigeria (19) iyo Israel (20).
Warbixintaan ayaa sal looga dhigay waxyaalihii 12-kii bilood ee ugu dambeeyey ka dhacay dalalkaasi iyo taariikh ahaan, dhacdooyinka argagaxiso ee ka dhaca dalalkaasi.
Waddamada loo aqoonsaday in ay aad khatar u yihiin marka la eego arrimaha argagaxisada ayaa loo tixgeliyey dhacdooyinka argagaxiso ee khatarta leh ee dilka badan geysankara oo dalalkaasi ka dhaca, iyadoo celcelis ahaan la sheegay in waddankii hal dhacdo ay ku dhintaan celcelis ahaan 6.59 uu liiskaasi gelikara, waxana lasii eegayaa sida ay dhacdooyinku usoo noq-noqdaan .
Waa markii koowaad oo dalka Koonfurta Sudan lagusoo daro liiska waddamada ay ka jirto khatarta argagaxiso, iyadoo la ogyahay in dalkaasi uu qarannimada helay bil uun ka hor.
Warbixinta ayaa ku tilmanatay Lord?s Resistance Army (LRA) iyo jamhaddii SPLA ee koonfurta Sudan in ay yihiin dambiilayaal argagaxiso.
Jamhadda LRA ee waqooyiga Uganda ayaa argagax ku haysay koonfurta Sudan, Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ah ee Congo iyo Jamhuuriyadda badhtamaha Africa tan iyo sagaashamaadkii.
George Athor?s, oo ah hoggaamiye ka tirsan dhaqdhaqaaqa koonfurta Sudan oo mucaarad ah ayaa la sheegay in uu masuul ka ahaa dilka booqolaal qof gobollada Jonglei iyo Niilka sare.
Somalia ayaa waxaa ka jira dagaallo soo noq-noqday, iyadoo kooxaha islaamiyiinta ah lagu eedeeyey in ay ku kaceen falal argagaxisnimo..
Cabdirshiid Muuse Siciid,
Puntland oo bilawday qorshe dareen-qaybsi ah oo ku aaddan dhib la wadaagidda dadka ay abaaruhu halakeeyeen.
Wasaarada Arrimaha Gudaha & Dawladaha Hoose ee Puntland oo soo bandhigtay wax-qabadkeedii 2009 – 2011.